Jubbaland oo sheegtay in 120 kun oo qoys ay abaaraha ku carytoobeen gobolladaas
Photo | Qaar ka mid ah dadka abaaraha ku barakacay ee Baardheere ku sugan/Sawir/Saalixi/Ergo
Radio Ergo 21 August, 2017 JUBBA LAND
Agaasimaha gudiga gurmadka abaaraha ee Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen, ahna wasiir ku xigeennka arrimaha gudaha ee maamulkaas, ayaa Ergo u sheegay in 120 kun oo qoys dad ka badani ay ku cayrtoobeen abaaraha, ayna ku yihiin barakac magaalooyinka saddexdaas gobol.
Wuxuu sheegay in weli qaybo ka mid ah gobolladaasi yihiin abaar oo aysan roob helin, ayna gurmad in la gaarsiiyo meelaha qaar ay saamaysay dhibaatada amaan ee ka jirta wadooyinka qaarkood.
Wareysi ;Wasiir ku xigeenka Arimaha Gudaha ee maamul goboleedka Jubaland
Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo ah Wasiir ku xigeenka Arimaha Gudaha ee maamul goboleedka Jubaland ahna Guddoomiyaha Guddiga gurmadka Abaaraha Jubbaland ayaa sheegay in weli qaybo badan oo gobolladaas ka mid ah ay abaarihii ka taagan yihiin, dadkiina ay barakacayaan.
Ilaa bishii Febaraayo ee sanadkan ayuu sheegay in guddiga gurmadka abaaraha heer Qaran ay soo gaarsiiyeen lacag ka badan ilaa $575,000, lacagtaasi ayuu sheegay in loo qeybiyey 3da Gobol.
Deeqaha kale xaga raashinka ayaa waxay naga soo kala gaareen ayuu yiri Jaaliyadaha soomaaliyeed, dowlaha Sacuudiga, Turkiga, Imaaratka Carabta ,Qadar, Cuman iyo weliba hay,adaha ICRC, WFP, ARC iyo kuwa kale.
Wasiirka oo u waramaya weriyaha Ergo ee gobolka Gedo Axmed Cumar Saalixi, halkaan hoose ka dhegeyso.